Somali News 06.09.21 | KWIT
Somali News 06.09.21
By Halima Osman • Jun 9, 2021
Iowans mar dambe awood uma yeelan doonto inay adeegsato websaydh dawladeed si ay u hubiso taariikhdooda tallaalka ama ta carruurtooda.
Isbadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro muran qaran oo ku saabsan in loo shaqeeyuhu ay awood u yeelan karaan inay ka codsadaan shaqaalaha inay helaan talaalada coronavirus iyo sharci dowladeed oo mamnuucaya isticmaalka ama soo saarida dowlada ee "baasaboorka talaalka".
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay xaddideysaa gelitaanka dadweynaha ee websaydhka, qayb ahaan sababtoo ah walaac laga qabo in loo-shaqeeyayaashu si qarsoodi ah u isticmaali karaan si ay u eegaan haddii shaqaalahooda la tallaalay.
Mid ka mid ah ragga loo haysto dilka laba ka mid ah shaqaalaha xabsiga Iowa ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago dabayaaqada bishan. Thomas Woodard maxkamaddiisa [WOOD-urd] waxay ka bilaabmi doontaa Gobolka Linn bisha Juun 22deeda, ka dib markii ay dhinacyadu ku heshiiyeen bedelka goobta.
Woodard iyo Michael Dutcher [DOO-cher] waxay labaduba ahaayeen maxaabiis xabsiga weyn ee Anamosa ee gobolka Jones markii la sheegay inay dileen kalkaaliso caafimaad iyo sarkaal dhaqan celin ah intii lagu guda jiray isku day baxsad.
Xaaladaha abaaraha ayaa la filayaa inay sii fidaan kana sii daraan guud ahaan gobolka Iowa marka khariidada cusub laga sii daayo berrito Kormeeraha Abaaraha Mareykanka. Cimilada sii socota ee kulul, cimilada qalalan ayaa ka muuqata saadaasha daadadka wabiga Missouri.
Codbixiyeyaasha Degmada Clay shalay waxay si aqlabiyad leh u diideen $ 41 milyan oo lacag curaar ah oo lagu bixinayo dhismaha maxkamad cusub, xabsi, iyo xarun sharci fulin.
Marka loo eego natiijooyinka aan rasmiga ahayn, qiyaasta ayaa ku fashilantay 2-1 farqi ah, iyada oo 1,544 degganeyaasha degmadu ay ka soo horjeedaan oo ay u codeeyeen 766. Aqlabiyad fudud ayaa loo baahday si arrinta curaarta u dhaafto. Degmadu waxay raadineysay in laga dhiso xarun dawladeed oo cusub Vermillion. Taageerayaasha ayaa sheegay in maxkamada hada jirta ay tahay mid waqtigeedii dhamaaday isla markaana u baahan dayactir qaali ah.
Kuwa ka soo hor jeeda cabirka ayaa doonaya inay arkaan dhismaha maxkamada taariikhiga ah.
Somali News 06.08.21 (Evening)
Agaasimaha Fulinta ee Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay marka laga hadlayo tallaalka COVID-19, in ka badan 36% guud ahaan dadka ku nool Gobolka Woodbury ayaa si buuxda loo tallaalay. In kabadan 40% waxay heleen uguyaraan hal qiyaas.
Kevin Grieme (Greeme - sida Green oo leh m) wuxuu leeyahay isbadal kuma imaanin tirinta hoose ee bulshada Afrikaanka Mareykanka ah ee qaata tallaalka. Saraakiisha maxalliga ah ayaa ku qiyaasay sicirka in ka yar hal boqolkiiba bartamihii bishii Abriil.